Waa Marka Aanu Koobka Horyaalku Micno Lahayn- UEFA Champions League Oo Noqday Hamiga Koox Kasta Oo Yurub Ah. - Gool24.Net
Waa Marka Aanu Koobka Horyaalku Micno Lahayn- UEFA Champions League Oo Noqday Hamiga Koox Kasta Oo Yurub Ah.
Kooxaha Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Manchester City iyo Bayern Munich dhamaantood waxaa ku filnaan waayay horyaaladii dalalkooda.
Laakiin kooxda Juventus waxay laba dariiq kala raaceen Maxi Allegri kadib markii ay ka hadheen Champions League waxaana sigtay Valverde iyo Thomas Tuchel oo Barcelon iyo PSG horyaalada ugu guulaystay.
Pep Guardiola ayaa eedayn badan kula kulmay qaabkii liitay ee ay kooxdiisa Man City uga hadahy UEFA Champions League ee kulankii Tottenham.
Bayern Munich oo iska soo yeelatay horyaalka Jarmalka ayaa doonaysa in ay wax walba badasho kadib ceebtii Liverpool kaga soo gaadhay Champions league.
Laakiin waxaa hadda lays waydiinayaa in koobabkii horyaaladu noqdeen kuwo aan ku filnayn hamiga ugu wayn ee kooxaha Yurub.
Waxaa hadda si buuxda loo fahmi karaa in UEFA Champions League uu noqday koobka kaliya ee ay koox kasta oo Yurub ahi ay hamigeeda ugu wayn ka dhigatay.
Inkasta oo ku guulaysiga horyaalka dal aanu ahayn wax sahlan, haddana kooxaha PSG, Barcelona, Bayern Munich, Juventus iyo Man City ayaa lagu ogaaday in aanu koobka horyaalku ahayn wax ku filan.
Maxi Allegri ayaa shaqada Juventus laga joojiyay kadib markii uu awood u yeelan kari waayay in uu kooxda ugu guulaysto koobka UEFA Champions League.
Laakiin Allegri ayaa Juventus ka soo caawiyay shan koob oo Serie A ah oo waliba xidhiidh ahaa oo ay la socdeen afar koob oo Coppa Italia laakiin waxa uu hadda ka baxayaa Turin.
Juventus ayaa muhiimada kowaad ka dhiganaysa in ay ku guulaysato koobka Champions League waxayna kala mid tahay kooxaha kale ee Yurub ee horyaalada ku soo guulaystay balse Yurub ku soo fashilmay.
PSG oo iska yeelatay horyaalka France ayaa sanad kasta isku soo diyaarisay in ay guul ka gaadho Champions League balse fashilkooda ayaa sii socda taas oo keentay in horyaalka iyo koobabka maxaliga ahi ayna ku filnaan.
Barcelona oo labadii xili ciyaareed ee ugu danbeeyay si qalbi jab ah uga hadhay Champions League ayaa go’aan ku gaadhay in ayna Valverde shaqada ka caydhin si ay markale fursad u siiyaan.
Barcelona ayaa min saddex gool oo ay lugtii hore ee Champions League hogaanka kaga haysay Roma iyo Liverpool waxay ku lumisay kulamadii lugta labaad ee siddeed dhamaadka iyo afar dhamaadka taas oo waji gabax keentay.
Inkasta oo waqtiyadii hore kooxda horyaalka ku guulaysataa ay micno badan samayn jirtay, hadda waxay u muuqataa in waxa kaliya ee si dhab ah layskugu qiimaynayaa uu yahay ku guulaysiga Champions League.
Liverpool iyo Tottenham ayaa xili ciyaareedkan loo arkaa kuwo ka dheereeyay saadaashii laga bixinayay Champions League waxayna mid ka mid ahi ku guulaysan doontaa Champions League.
Sidaa daraadeed, haddii ay Liverpool ku guulaysato Champions league waxaa laga saraysiinayaa kooxda koobka Premier league ku soo garaacday Reds ee Man City maadaama oo hadda Champions league loo arko waxa ugu sareeya.